किताबै जलाउनुपर्ने कविता ! ⋆ JINDAGANI.COM
Home » किताबै जलाउनुपर्ने कविता !
असार २५, २०७८	0	By कला अनुरागी
दिनेश अधिकारी नेपाली कविता र गित लेखन क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तीसको दशकको सुरुवातदेखि नै कविता र गीत लेखनमा सक्रिय अधिकारीका दर्जनौं कृति सार्वजनिक छन् । उनको कविता ‘हर्कबहादुर’ गत वर्षसम्म कक्षा ११ को अनिवार्य नेपालीको पाठ्यक्रममा समावेश थियो । उनी आफ्नो कविताको कथा यसरी बताउँछन्-
यो कविता २०३८ साल असोज १६ गते सर्लाहीको हरिऔनमा लेखेको हुँ । नेपाली साहित्यमा धेरैलाई स्थापित गर्न भूमिका खेलेको त्यति बेलाको चर्चित पत्रिका ‘रुपरेखा’ले २०३८ चैत, पूर्णांक २५१ मा छापेको थियो ।
साझा प्रकाशनले ‘धर्तीको गीत’ नामको मेरो दोस्रो कविता संग्रहमा पहिलो कविताको रूपमा यो संग्रहित छ । त्यसअघि मेरो ‘अन्तरका छिटाहरू’ कविता संग्रह ०३७ बैशाखमा छापिएको थियो । ‘धर्तीको गीत’चाहिँ ०४४ मा छापियो । यो कविता लेख्दा मेरो उमेर २२ वर्ष थियो ।
बन्दुक बनाउने कम्पनीको निश्चितता छ । एउटा मेसिनमा फिट ग-यो, आवश्यक सामग्री हाल्यो, निस्कन्छ । सबै यस्ता कुराको निश्चितता छ तर उसको जिवनको निश्चितता छैन । कामको निश्चितता छैन ।
काठमाडौँमा बिएल पढ्दै थिएँ । छुट्टीको बेलामा घर गएको थिएँ । त्यहाँ एउटा पात्र देखेँ, जो कसैको बारीमा कटेरो बनाएर बसेको छ । परिआएको काम गर्छ र ज्याला लिन्छ । कहिले दाउरा बोक्न जान्छ । कहिले आली तास्न जान्छ । कहिले हलो जोत्न जान्छ । उसलाई माध्यम बनाएर मैले मानवताको पक्षमा कवितामा लेखेको हुँ ।
हामी कतै सम्पन्नताको नाममा मानवताको उपहास त गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा उठाएको हुँ । उसलाई राज्यले दिनुपर्ने संरक्षण दिन सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेको छैन । ऊ आफ्नै संघर्षले बाँचिरहेको छ र अनिश्चयको जीवन बाँचिरहेको छ ।
काम गर्न पायो ग-यो, काम छैन त बेलुकाको सामल घटाउनु प-यो । बन्दुक बनाउने कम्पनीको निश्चितता छ । एउटा मेसिनमा फिट ग-यो, आवश्यक सामग्री हाल्यो, निस्कन्छ । सबै यस्ता कुराको निश्चितता छ तर उसको जिवनको निश्चितता छैन । कामको निश्चितता छैन ।
हर्कबहादुरजस्तो मान्छे, जो नाङ्गै छ । त्यसलाई उपहास गरेर हामी झण्डामा खर्च गरिरहेका छौँ । संसारभरिका झण्डा बटुलेर लुगा सिउने हो भने हरेक नाङ्गोलाई भाग पुग्छ । हरेकलाई कछाड पुग्छ, मजेत्रो पुग्छ ।
यस्तो परिदृश्यले कवि मन दुखित हुन्छ । केही गर्न नसके पनि उसलाई सलाम गर्न सक्छ । उसको पसिनाको प्रशंसा गर्न सक्छ । उसमाथि अन्याय भएको छ भनेर आवाज उठाउन सक्छ । कविता त्यसरी नै अन्त्य भएको छ ।
हर्कबहादुर हरिवनको मात्र बासिन्दा होइन, गाउँ वा सहरमा जहाँ पनि भेटिन सक्छ । कविता लेख्दा मैले जागिर खान थालेको एक महिना हुन लागेको थियो । त्यसअघि मैले म पुर्ख्यौली घर केहीपटक पुगिसकेको थिएँ ।
कविता लेखिएको कविको डायरीको पन्ना l तस्विर सौजन्य: कवि
हरिवनबाट सिन्धुली, रामेछापको बाटो हुँदै हिडेर गएको थिएँ । रामेछापको घोक्सिलामा मेरो मावली हो । सिन्धुलीमा ठूलीआमा बस्नुहुन्छ । ती ठाउँमा धेरैपटक गइसकेको थिएँ । तराई त स्वभाविक रूपमा घुमेकै थिएँ ।
यसरी विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन र पात्रको छायाँ पनि कवितामा आएको छ । कविता पाठ्यक्रममा पनि समावेश भयो । पाठ्यक्रममा समावेश हुँदा मलाई थाहा थिएन । जब थाहा पाएँ, प्लस टूमा राख्दा अलि जटिल हुन्छ कि भन्ने ठानें ।
तर अहिलेको समय परिवर्तन भइसकेको छ, त्यसअनुसार बुझाइको तह पनि परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले त्यस्तो लागेन पछिचाहिँ । गत वर्षमात्रै पाठ्यक्रमबाट हटाइएछ l
पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि सुरु–सुरुमा मलाई केही शिक्षकले फोन गरेर ‘मैले यस्तो बुझेँ, के हो भनेर सोध्नुभयो । ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्मका शिक्षकले फोन गरेको सम्झना छ ।
उहाँहरूले बुझेको कुरा ठिकै थियो । केही कुरामा उहाँहरू दुविधामा परेको पाएँ । ‘समय, शायद आफ्नो पुच्छर आफैँले निल्ने सर्पले भोग्छ’ भन्नेमा । मैले त्यो प्रसंग त्यसबेला सुनेको तथ्यबाट लिएको थिएँ । एकजातको सर्पले निश्चित समयमा आफ्नो पुच्छर आफैंले निल्छ । त्यसैलाई मैले राखेको हुँ ।
पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि मौका पर्दा म स्कूलहरूमा पस्छु ।त्यतिखेरि ‘म फलानो हो’ भनेपछि शिक्षकहरू जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । त्यस्तै विद्यार्थीको धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु ।
त्यसो त त्यो प्रसंग अघि र पछिको प्रसंगले पनि बुझिन्छ । सर्प बरु समयमा बाँडिएको छ, तर हर्कबहादुरको जीवन समयमा बाँडिएको छैन भन्ने अर्थमा मैले प्रयोग गरेको हुँ भनेर भनेँ । पछिल्लो समयमा खासै त्यस्तो जिज्ञासा आएको छैन । पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि मौका पर्दा म स्कूलहरूमा पस्थें ।
त्यतिखेरि ‘म फलानो हो’ भनेपछि शिक्षकहरू जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै विद्यार्थीको धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्रेण्ड रिक्वेस्ट’ आउँछ, म कमै स्वीकार गर्दोरहेछु । अनि ‘मैले हजूरको हर्कबहादुर पढेको छु, मलाई स्वीकार गर्नुस्’ भनेर ‘म्यासेज’ आउने गरेको छ ।
एकपटक, म महिला बालबालिका मन्त्रालयको सचिव थिएँ । महिला बालबालिकाको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा भवन निर्माण भएको थियो । त्यसको उद्घाटनको लागि म गएँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अलि ढिलो आउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सर, आज ढिला भयो । ११ कक्षाको कोर्समा एउटा कविता रहेछ । त्यसैलाई लिएर केही राजनीतिक दल किताब जलाउने भन्न थाले । त्यसैले लफडा भयो ।’ मैले कुन कविता भनेर सोधेँ।
‘हर्कबहादुर भन्ने रैछ’, उहाँले भन्नुभयो । किन जलाउने भनेका रहेछन् भनेर सोधेँ। झण्डाको विरोध गरिएकाले रहेछ भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यो कविता मैले नै लेखेको भनेर भनेँ । उहाँ छक्क पर्नुभयो । किनभने मेरो अफिसियल नाम दिनेशहरि अधिकारी भएकाले उहाँ झुक्किनु स्वाभाविक थियो ।
त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यहाँ झण्डा प्रतीकका रुपमा आफूले प्रयोग गरेको बताएँ र त्यसरी नै बुझाइदिन आग्रह गरेँ । झण्डाको विरोध गरेको होइन, झण्डा बटुल्यो भने नाङ्गा मान्छेले लुगा लगाउन पुग्छ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा भनेको स्पष्ट पारेँ । कोही पनि मान्छे नाङ्गो हुनु भएन भन्ने अर्थ हो भन्ने व्याख्या गरेँ।
उहाँले त्यो कुरा बुझाएपछि समस्या हल भयो भन्नुहुन्थ्यो पछि । कविताको सन्दर्भमा योचाहिँ रोचक घटना थियो ।
प्रस्तुत छ कविता:
ऊ हर्कबहादुर हो l
मान्छे स्वयंमा परिलक्षित आकाश हुन्छ l
हर्कबहादुरले सधैँ कोदाली मागेको छ l
हर्कबहादुरभन्दा ठूलो अर्को देश हुनै सक्तैन l
एक सर्को फुक्न बिँडी पनि बेर्न सक्तैन l
ऊ तपाईँको गाउँमारसहरमारदेशमा पनि भेटिन सक्छ
Tagsदिनेश अधिकारी नेपाली कविता